Ny gazety Ao Raha	Ny gazety Ao RahaTahiry
Ny gazety Ao RahaMiverena
Ny 08 aogositra 2005 no niforona ary nivoaka voalohany ho an’ny mpamaky ny gazety Ao Raha (Iray amin’ireo vokatry vondron’orinasa L’Express de Madagascar, izay ahitàna ny gazety L’Express de Madagascar sy ny L’Hebdo de Madagascar) . Gazety amin’ny teny Malagasy ranoray, miezaka mitondra ny teny Malagasy madio sy mahitsy. Tsy manana loko politika na miandany amin’iza na amin’iza ny Ao Raha ary ahitàna ireo vaovao amin’ny sokajiny rehetra, tsy manavaka taona sy saranga.
Natao ho takatry ny besinimaro ihany koa anefa izy, ka isan’ny nanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa an’aliny ny fampiakarana ho 12 pejy ny gazety taorian’ny nanondrotana ho Ar 200 ny vidiny. Mampiavaka azy ankehitriny ny fisian’ny fanadihadiana manokana mivoaka isan’andro, nokendrena tsy hifanalavitra amin’ny fiainan’ny mponina andavanandro.
Tsy mitsahatra mamaly ny hetahetan’ny mpamaky ihany koa ny Gazety Ao Raha, miaraka amin’ny fanatsarana isan-karazany mifanaraka amin’ny filàn’ny mpanjifa. Porofon’izany ny fiforonan’ity tranokalam-pifandraisana www.aoraha.com ity. Niniana narafitra tsy hivoana amin’izay voarakitra any anatin’ny Gazety ny sokajin-dahatsoratra sy takila ao anatiny, saingy kosa tsy maintsy manana ny mampiavaka azy.
Araka izany, ho fampahalalam-baovao sy fanabeazana ary fanalana andro ho antsika mpitsidika ihany koa ny www.aoraha.com. Hisokatra amin’ny ady hevitra ireo lahatsoratra na fanadihadiana hatolotra antsika ao anatiny. Fomba iray hahafahana miserasera eo amin’ny Gazety Ao Raha sy ny mpamakiny indrindra ihany koa.
L’EXPRESS DE MADAGASCAR S.A
BP 3893 – Ankorondrano – 101 Antananarivo Madagascar
Téléphone: +261 20 22 219 34
Foibe fanoratana :
Ankorondrano – 101 ANTANANARIVO
Tale Mpanatanteraka : Eric Andrianarivelo-Razafy
Talen’ny Famoahana : Eric Andrianarivelo-Razafy
Talen’ny Fanoratana : Sylvain Ranjalahy
Tonia lefitry ny fanoratana :Rina Rasoava
Mpanao gazety :
Juliano Randrianja (Raharaham-pirenena)
Faniry Ranaivoson (Raharaham-pirenena)
Hanitra Ramiliarisoa (Fihariana)
Faly Randriamiarantsoa (Kolontsaina)
Romeo Andriamihaja (Fanatanjahantena)
Naka Andrianjanaka (Tranga samihafa)
Ireo mpanao gazety any amin’ny Faritany :
Vero Andrianarisoa (Mahajanga)
Francis Ramanantsoa (Toliara)
Hery Fils Andrianandraina (Ambatondrazaka)
Angola Ny Avo (Antsirabe)
Téléphone : +261 20 22 620 32
Mobile : +261 32 02 472 87
Fax: +261 20 22 620 32
Lova Rafidiarisoa: it@lexpressmada.com